Google AMP Cache URL Generator - SO
flash_auto Abuur bogagga AMP
extension AMP IVW online tirinta
extension Geli AMP iframe tag
Google AMP koronto -dhaliye url url
Google-AMP-Cache-URL-Generator wuxuu abuuraa URL ku habboon AMP-Cache-Format oo laga helo URL-ka caadiga ah ee bog kasta, degel kasta.
Abuur URL AMP Cache URL
- Fadlan sug -
- shabakadda waa la hubiyaa -
Abuurtay URL-ka Google AMP khasnado
Dhis AMP khasnado url
Iyada oo leh URL -ka khasnadda ee la soo saaray, nooca AMP ee degel lagu kaydiyo keydka AMP -ka Google waxaa la dhihi karaa HADDII bogga u dhigma ay horay u tilmaamtay Google oo lagu keydiyey kaydka Google.
Qaabka URL-ka AMP khasnado
Hadday suurogal tahay, Google AMP Cache-ku wuxuu u sameeyaa subdomain dhammaan bogagga AMP ee isla bogga ku yaal.
Marka hore, bogga shabakadda waxaa laga beddelay IDN (lambarka sirta) loona beddelo UTF-8 . Server keydku wuxuu badalayaa:
mid kasta - (1 isweydaarsi) illaa - (2 jiifood)
qof walba . (1 dhibic) illaa - (1 cirif)
Tusaale: amp-cloud.de wuxuu noqon lahaa
Cinwaanka la beddelay waa cinwaanka martigeliyaha ee Google AMP khasnado URL. Tallaabada xigta, URL-ga khasnado buuxa ayaa la isku dhejiyaa, iyadoo qaybaha soo socda lagu daro cinwaanka martida:
tilmaame kala saara nooca faylka
a / c / faylasha AMPHflix
a / i / sawirro
a / r / for noocyada (noocyada)
tilmaame awood u siinaya soo dejinta iyada oo loo marayo TSL (https)
a / s / dhaqaajin
URL-ka asalka ah ee websaydhka oo aan lahayn qorshaha HTTP
Tusaalaha URL ee qaabka URL AMP Cache ee Google:
Tusaale URL oo tusaale ah:
Url kaydsiga AMP -ka aragti ahaaneed:
Waa maxay kaydka AMP ee Google?
Qayb ka mid ah dardargelinta bogagga shabakadda ee qaabka Google AMP waxaa sababa kaydinta otomaatigga ah ee keydka adeegga ee raadinta Google . Tani waxay ka dhigan tahay in noocyada 'AMP' ee degelku aanu ka soo rarneyn shabakadda websaydhka, sida had iyo jeer dhacda, laakiin si toos ah looga helo natiijooyinka raadinta raadinta Google, mid ka mid ah server-yada Google (Google AMP cache server) , oo badanaa waxay awood u leeyihiin inay si dhakhso leh u dhaqaajiyaan waqtiyada rarka.
Tani waxay ka dhigan tahay in Google uu tilmaamo oo uu kaydiyo nuqul ka mid ah bogga AMP serverkiisa, iyada oo hoos timaada URL server-ka cache ee AMP ee madax-bannaan oo loo sameeyay si waafaqsan qaab gaar ah. URL-kan, qaabka URL cache AMP , waxaad wici kartaa oo aad arki kartaa nooca AMPHTML ee hadda ku jira kaydka AMP ee mashiinka raadinta Google. - Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaydka Google AMP .
Salaan oo waad ku mahadsan tahay booqashadaada! - Kukiyada waxaa loo isticmaalaa in lagu abaabulo shaqeynta "www.amp-cloud.de". Tan waxa kale oo ka mid noqon kara adeegyada iyo waxyaabaha ka kooban bixiyayaasha dhinac saddexaad, tusaale ahaan in la bixiyo hawlaha warbaahinta bulshada ama waxa ku jira fiidyowga, laakiin sidoo kale in la awoodo si qarsoodi ah, falanqaynta tirakoobka ee waxqabadka website-ka in la hagaajiyo iyo in la maalgeliyo sii jiritaanka boggan Taageerada dhinaca. Iyadoo ku xiran shaqada, xogta laguu qoondeyn karo waxaa loo gudbin karaa qolo saddexaad oo ay baaraandegi karaan. Waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan adeegsiga iyo xulashooyinka loogu beddelayo setinkaaga cookie halkan: Macluumaadka ilaalinta xogta